China Polyethylene Glyeol 6000 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
I-Polyethylene glycol isetyenziswa ngokubanzi kumalungiselelo amayeza amaninzi, anje ngenaliti, amalungiselelo asemxholweni, amalungiselelo e-ophthalmic, amalungiselelo omlomo kunye namalaphu. Ibanga eliqinileyo le-polyethylene glycol linokongezwa nge-polyethylene glycol engamanzi ukulungelelanisa i-viscosity yeoyile yamafutha; Umxube we-polyethylene glycol unokusetyenziswa njenge-matrix ye-suppository; Isisombululo esinamanzi se-polyethylene glycol sinokusetyenziswa njengoncedo lokumiswa okanye ukulungisa i-viscosity yezinye izinto zokumiswa; I-polyethylene glycol kunye nezinye i-emulsifiers zingasetyenziselwa ukwandisa uzinzo lwe-emulsion. Ukongeza, i-polyethylene glycol ikwasetyenziswa njengearhente yokutyabeka ifilimu, igrisi yokuthambisa kunye nezinto ezilawulwayo.
iipilisi, idyasi yefilimu, iipilisi, iifomsile, amakhandlela kunye nokunye.
Ukulahla iMatrix yePilisi
I-polyethylene glycol iyimatriki efanelekileyo yokulungiselela ukusasazeka okuqinileyo kweziyobisi ezingenakunyibilika, kunye nezibonelelo zayo ikakhulu zezi zilandelayo
(1) Ubunzima beemolekyuli zezinto eziphilayo ubukhulu becala bungaphantsi kwe-400 okanye i-500, ngelixa ubunzima beemolekyuli ze-polyethylene glycol ziyi-1500, 4000 kunye ne-6000, yiyo loo nto inokwenza isisombululo esiqinileyo.
(2) Emva kwenkqubo yokuchithwa kweziyobisi, kunzima kakhulu ukupholisa ngokukhawuleza ukwenza i-nucleation yeziyobisi. Ngaphantsi kobushushu obuphantsi, ixesha elisetyenziselwa ukunyanga lifutshane kakhulu ngenxa ye-viscosity ephezulu, ngenxa yoko i-solute inokwenza i-crystallites.
(3) I-polyethylene glycol ibonakala elubala lokukhanya okubonakalayo kunye ne-ultraviolet, ke ekuzimiseleni komxholo kunye novavanyo lokunyibilika, inokufunyanwa ngokuthe ngqo kusetyenziswa ukukhanya okanye ukukhanya kwe-ultraviolet.
(4) I-PEG yipolymer e-crystalline e-soluble polymer, kwaye kukho iiyunithi ezimbini zokujikeleza kwiyunithi nganye yeemolekyuli. Xa unyango lwe-ethylene glycol lunyanga, izixa ezikhulu zeziyobisi ziyabandakanyeka kwezi ndawo zinendawo emise okomoya. Ukongeza, njenge-matrix, inokuqhuba ngenqanaba lokuchithwa okuphezulu kwezinto eziqulethe izinto.
Indlela yokupakisha:25kg okwakhiwa iphepha lephepha
Ukugcina kunye nokuThutha: Le mveliso ayinabungozi, ilangatye libuyisela, njengokuthunyelwa ngokubanzi kweekhemikhali, zitywinwe kwaye zigcinwe kwindawo eyomileyo.
Egqithileyo I-PEG 4000 Polyethylene Glyeol 4000